नेकपा बागलुङको ‘जनतासंग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम ! – ebaglung.com
२०७६ कार्तिक ४, सोमबार १५:४८	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ नगरपालिकामा नेकपाको आयोजनामा जनतासंग जनप्रतिनिधी अभियान लिएर गाउँ गाउँ छिरेका छन् अहिले नेकपाका जनप्रतिनिधिहरु। यो राम्रै पनि हो तर त्यस्का भित्री पाटो केल्याउन मन लाग्यो आज। जनता भनेको त्यहा बस्ने हरेक बासिन्दा हुन र प्रतिनिधि भनेको तिनै बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गरेर उपल्लो निकायमा गएका सीमित ब्यक्ति हुन भन्ने बुझ्दछु। जहाँ जनता र जनप्रतिनिधिको नाम जोडिन्छ त्यहा बिसुद्ध जनता र जनप्रतिनिधिको हैसियतले नै जानुपर्छ, कुनै पार्टीको झन्डा या ब्यानर लिएर जाने हैन, यदि ब्यानर र झन्डा बोकेर नै जाने हो भने त्यस्लाइ ूकार्यकर्तासंग पार्टीका प्रतिनिधिू नाम दिएर जांदा राम्रो हुन्छ होला।
जब कुनै पार्टी बिशेष अभियान चल्छ त्यहा आम जनताको सहभागिता बढ्ला कि पार्टीका कार्यकर्ता बढ्लान त्यस्तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दैन र ? ल ठिकै छ, आयोजना गरेर राम्रै काम गरे अनि त्यस्को उपलब्धी के त ? आजसम्म कतिका गुनासा सुनुवाइ भएका छन त ? के त्यहां अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले उठाएका आवज बिसुद्ध रुपमा सुनिएला ? या अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले सकारात्मक सुझाव देलान त ? पार्टीको कार्यकर्ताको कुरै छोडौं अन्य जनता कत्तिको सहभागी छन त ? त्यहा आफ्ना कार्यकर्ता नै बढी हुन्छन त्यस्मा दुई मत नै छैन, हाम्रो परिपाटी नै यहि छ कि कुनै बिपक्षी पार्टीका कार्यक्रमलाइ सकारात्मक ढंगले लिइंदैन अनि उक्त अबस्थामा ती ब्यक्ती जो अन्यमा आबद्ध छन अनि तिनी चाहिँ जनता हैनन होला र ? के तिनिहरुका समस्या सुनुवाइ हुन्छ होला र ? अनि उनिहरु पनि के अर्कै पार्टीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गएर के आफ्नो गुनासो राख्ने भन्ने मानसिकताले बस्लान त ? यो परिपाटीको मात्र कुरा हो ।
सर्बमान्य हुनुपर्ने हैन र जनप्रतिनिधी त ? कि ब्यक्ती र पार्टी विशेष हुने हुन र ? केही समय अघीमात्र एउटा वार्डको लेटरप्याडमा पार्टीको आयोजनामा हुने भन्दै लेखिएको थियो त्यस्को सर्बत्र बिरोध भएको थियो । अभियान राम्रै होला तर त्यस्लाइ कुनै पार्टी विशेष नभै बरु सम्बन्धित नगरपालिका या गाउंपालिकाले आयोजना गरेको भए उत्तम हुने थियो होला ।
यसरी पार्टिको झन्डा फहरिने ठाउंमा स्वतन्त्र नागरिक गएर कसरी आफ्ना जिज्ञासा र समस्या राख्न सक्लान ?
यहाँ कसैको पक्ष र बिपक्षका कुरा रहेनन फेरि यो त बिपक्षी दलको रहेछ भन्ने सोच्लान, सहिलाइ सहि र गलतलाइ गलत भन्ने हिम्मत म एक स्वतन्त्र नागरिकलाई पक्कै नि छ होला नि हैन ?
२०७६ कात्तिक ४ ।